Faalloyinka – Page 7 – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
DAAWO:- Nabad iyo Nolol oo ka hadalsiisay Siyaasiyiinta Abgaal “Cali Geedi oo dhagaha kajafay Shariifka iyo Xasan”.
November 11, 2019 marqaan 0
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Dowladii KMG aheyd Cali Maxamed Geedi ayaa ka hadlay xaalada siyaasadee ee xilligaan ka jirta dalka iyo hadalkii kasoo yeeray Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed & jawaabtii dowladda. […]
Maxaa iska badalay Dagaalkii Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta “Farmaajo wuxuu uduulay Nairobi”.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u amba baxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo uu kaga qayb-gelaya Shirka Dadweynaha iyo Horumarka oo ay soo qaban-qaabisay Qaramada Midoobey. Shirkan oo uu hoggaaminaayo […]
MD Lafta Gareen oo markii ugu horreysay lugihiisa kutagay deegaan u go’doonsan Alshabaab.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in dadka ku nool degmada Waajid ay heystaan dhibaatooyin ay kala kulmayaan Al shabaab. Madaxweynaha oo maanta Diyaarad ku tagay degmadaasi ayaa […]
Deni Iyo Dhoobo Ayaa Sharciga Jabiyey W/Q:Axmed
November 11, 2019 marqaan 1
Meeshan waxa ka socdaa Ra’iisal Baarlamaanku ama Dawlada uu Madaxweynuhu gadhwadeenka ka yahay ha ka amar qaato ama xoog ayaa loo adeegsanayaa. Dawlad hadaad maqasho waa jumlad. Jumladaas oo ay tahay hadana faracyo ayay kala […]
DAAWO VIDEO:Madaxweyne Hirshabelle Waare”Diyaarada Qaaday xasan Sh.iyo Sheekh Sharif Maxkamad Baan La Koraynaa”
November 10, 2019 marqaan 8
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif & Xasan Sheekh & Xasan sheikh ayaa waxaa ay Maanta booqasho ku tageen Balaweyne,hayeeshee Xildhibaano ka tirsan golaha Shacabka ay sheegeen in kal hore loo diiday inay Garoonka ka […]
DAAWO:- Dhaqaale lagu hubaynayo Dhoobo-Daareed oo laga aruurinayo Qurbaha + Warsangeliga Dibadaha kunool oo soo hadlay.
November 10, 2019 marqaan 4
jaaliyada Beesha Warsangeli ama Maakhir ee Ku dhaqan dalka Caalamka ayaa Si adag uga Hadlay Falkii Xilka Lagaga Qaaday Dhoobo-daareed iyagoo Sharci Daro Ku Tilmaamay Xilka qaadistisina. Kulan Jaaliyadu ay yeelatay ayay ku balan qaadeen […]
DAAWO:- MD Deni oo Ceyb dhexda kaga fadhiyo kadib markii Isimada waawayn ay la safteen DhoobaDaareed “Hadalo kulul oo Dhexmaray Islaan Ciise iyo Deni”.
November 10, 2019 marqaan 6
Kadib weerarkii iyo xilka qaadistii gudoomiye dhoobo lagu qaaday waxaa laysku dayey in marti qaad la sameeyo lagula kulmayo suldaanka beesha warsangali iyo odayaasha gobolada sanaag iyo haylaan si loogala hadlo arimihii dhacay oo ay […]
XOG:- Kheyre iyo Madaxwaynaayaashii hore oo isku haya Safarka Baladwayne ee Saakay “Gurmad isku badalay Loolan siyaasasdeed”.
November 10, 2019 marqaan 0
a’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sii jeeda magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan, si ay kormeeraan howlaha gargaarka ee ka socda magaaladaas, kaddib markii kumanaan ruux ay ku barakaceen […]
DAAWO VIDEO:Talo Weyn Ayaa Loo Siiyey dadka degan gobolada Sool iyo Sanaag, balse ma maqli doonaan taladaa uu siiyey?
Shacabka Puntland ayaaa ka dhiibtay aragtiyahooda ku aadan wixii ka dhacay Garoowe ee lagu riday Guddoomiye Dhoobo Daareed. Hadaba, Shiikh Cabdi Xirsi Fagare ayaa tallo siiyey dadka degan gobolada Sool iyo Sanaag, balse ma maqli […]
DAAWO:- Siduu udhacay Weerarkii xalay lagu qaaday Xarunta Baarlamaanka Puntland “Gudoomiye Dhoobo Xaguu joogay xilligii Rasaastu socotay?”.
November 7, 2019 marqaan 2
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed ayaa xukuumadda ku eedeeyey in ay ka dambaysay weerar xalay lagu qaaday Hoolka Baarlamaanka Puntland ee Garoowe . ” Ciidamadii Dawladda , xatta kuwii daraawiishta ee furimaha joogay noc […]
XOG:- Musharax kale oo durba la saadaalinayo inuu buuxiyo booskii uu baneeyay Gudoomiye Dhooba-Daareed.
November 7, 2019 marqaan 1
Xildhibaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo loo yaqaan (Abwaan Cabdirashiid) ayaa loo saadaalinaya in uu beddelo guddoomiyaha Baarlamanka Puntland, haddii uu xilka banneeyo Cabdixakiin Dhoobo, sida ay sheegayaan xeel-dheerayaasha falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland. Abwaan Cabdirashiid ayaa […]
DAAWO:- Ciidamadii kasoo goostay Axmed Madoobe oo soo galay Luuq “Iyagoo heesaya iyo shacabka oo faraxasan + Rasaas”
November 6, 2019 marqaan 0
Ciidamadii maanatay ka soobaxay baladxawo ayaa si diiran loogu soodhoweeyay dagmada luuq waxayna lawareegeen saldhiga dagmada iyo meelo kale oo muhiim ah halkaas oo lafilayo inay ku maraan daata baysta kana mid noqdaan ciidamada xooga […]
XOG:- Maxay tahay Sababta uu Muuse Biixi uu eryay wakiilkiisi UK “Sawirkii ay la gashay nin ka nixiyay Biixi oo…”
Wakiilkii Somaliland ee Ingiriiska Marwo Ayaan Maxamuud, waxa xilka laga qaaday Laba iyo toban saacadood kaddib markii ay barteeda Facebook iyo Twitter soo dhigtay sawir ay kula jirto guddoomiyaha ku meelgaadhka ah ee xisbiga Waddani […]
Sidee loo bixiyaa Gurmadka loogu talagalay daka ku saamoobay Fatahaadaha Wabiyada.
Wasaaradda Gargaarka iyo maareynta Musiibooyinka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in howlaha gurmadka ee loo sameynayo Dadka ay Fatahaaddu saameysay ay si wanaagsan u socdaan. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gargaarka,Mukhtaar Sheekh Xuseen Jimcaale oo la hadlay […]